ဒီအီးမေးလ်မှတ်စု ၂၇ ခုသည်သင်၏ INBOX ထဲရှိသူများနှင့်မတူသည်ကိုသင်တွေ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် - သတင်း
တွစ်တာတွင်မကြာသေးမီကသင်သည်လူအများစုမှစာများဖြင့်မှတ်စုများဝေမျှခြင်းကိုတွေ့ခဲ့ရလိမ့်မည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အီးမေးလ်ကသင့်ကိုကောင်းမွန်စွာတွေ့နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ နှင့်ရိုးရိုးသားသားပြောရလျှင်ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တစ်နှစ်လုံးတွေ့ခဲ့ရသမျှတိကျဆုံးမှတ်စုများဖြစ်သည်။
ဒီစကားစုကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ?! အဘယ်ကြောင့်လူများကပင်ကပြောပါတယ်?? မဟုတ်ပါ၊ သင့်အီးမေးလ်မရှိပါ ငါ့ကိုတွေ့ပြီ ငါစိတ်ဖိစီးမှု, ငြီးငွေ့ခြင်းနှင့်ငါဘယ်သူမှအစဉ်အဆက်အားလုံးရိုးသားမှုအတွက်ငါ့ကိုနောက်တဖန်အီးမေးလ်ပို့ချင်ပါတယ်။ အမှိုက်ပုံးထဲမှာဖြောင့်ဖြောင့်။
မှတ်စုများအတွက်အခြေခံပုံစံမှာလူများရေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအီးမေးလ်ကသင့်အားကောင်းစွာတွေ့လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ထို့နောက်သင်ကတိတိကျကျပြန်ပြောလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ အီးမေးလ်ကသင့်ကိုမည်သို့မည်ပုံတွေ့ရှိကြောင်းကိုပိုမိုလက်တွေ့ကျသောရုပ်ပုံဖြင့်ကျွန်ုပ်အားမည်သို့တွေ့ရှိခဲ့သနည်း။ ဟုတ်တယ်ငါကောင်းတယ် !!
၁။ ငါဟာ ၀ တ်ဆင်မှုအတွက်နည်းနည်းပိုဆိုးတယ်လို့သင်ပြောနိုင်ပါတယ်
အဘယ်သူသည် instagram အပေါ်မှာငါ့ရုပ်ပုံကြိုက်တယ်
- ဘင် Yahr (@benyahr) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၈ ရက်
- မေယာဟူစတန်✨ (@elcincodemaya) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၉ ရက်
- Tom Zohar (@TomZohar) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၃၀ ရက်
music prof: ဒီအီးမေးလ်ကသင့်ကိုကောင်းကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
- CHOIR TEA (@ChoirTea) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၄ ရက်
- Isa (@isa___nim) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
၇ ။ ဝေး။
- နီစကလို (@Nyscalo) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
8. ငါ OK ကိုဖိအားပေးတယ်
- ပုဆိန် (@axelgxmxnxz) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
- မိန်းကလေးများ၏သမိုင်းကြောင်းနေ့စဉ်➐ (@amickdaily) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
၁၀။ မင်္ဂလာပါအမှောင်ငါ့မိတ်ဆွေဟောင်း x
- နွမ်းပါး (@wallysfax) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၇ ရက်
၁၁။ ဒီအီးမေးလ်ကကျွန်တော့်ကိုဘယ်လိုတွေ့ခဲ့သလဲဆိုတာထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
- 'ဒီမိုကရေစီ' diva (@democracydiva) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
- ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်: sheeva (@sheevasmells) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၃၀ ရက်
13. အရာအားလုံးအဆင်ပြေသည် x
- အရူးယောက်ျား pics (@madmenpics) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၃၀ ရက်
၁၄။ ကျွန်ုပ်၏ဤပုံကိုမည်သို့တွေ့ခဲ့သနည်း ?????
- Big Kitty (@_joydoe) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၆ ရက်
- Halle Berry (@halleberry) ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၂၈ ရက်
- စတီဖင်ဟော့ပ်ကင်း (@phil_lol_ogist) သြဂုတ်လ 31, 2020
- SparkNotes (@SparkNotes) သြဂုတ်လ 31, 2020
- Florence Maria (@flortundis) သြဂုတ်လ 31, 2020
19. ဒါဟာရုံအဆင့် xD ပါပဲ
- အင်းငါနေဆဲ emo တယ်, ဒါဘာလဲ (@ThyArtIsMemes) သြဂုတ်လ 31, 2020
- as လိယ Jahshan | الياسجهشان (@Elias_Jahshan) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
21. ဟုတ်ကဲ့ ngl ငါက x ပြန်ကြားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
- A✌ (@husseybyname) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
- ဒန်နီ (@shckldg) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
- Tequila မထီမဲ့မြင်ပြုသူ (@pizzapurist) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
- ဟာဆန်အလီ (@serotoninkid) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
- ဟယ်လိုတီ (@heloisetst) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
- Lollee (@lolleeshe) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
၂၇ ။ အချိန်။
- Myrna Lee (@Puebla_Sol) စက်တင်ဘာ ၁ ရက်၊
• ငါသည်သင်တို့ကိုအကြောင်းကိုမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်စိတ်ပိုင်းမှာဒီ 33 Hilary မှတ်စုများနှင့်အတူဤအရပ်၌ဖြစ်၏
• ဉာဏ်စမ်းပဟေ:ိ - ဒီကိစ္စဟာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တာလား၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့အချိန်ကိုဖျက်ဆီးပြီလား။
• တွစ်တာတွင်လူတိုင်းကလုပ်သောစိန်ခေါ်မှု 'မင်းရဲ့ကျော်ကြားတဲ့မိဘတွေဟာ' လုပ်နည်း
မှတဆင့်အထူးသဖြင့်ပုံရိပ်နောက်ခံ ရေဖြန်း ။
ဤရွေ့ကားအားလုံး Netflix တွင် Dirty ဂျွန်ရာသီနှစ်ခု၏စစ်မှန်သောဘဝရိုက်ကူးနေရာများဖြစ်ကြသည်
Love Island မှ Marcel သည် Gabby အားသူတို့အားလပ်ရက်တွင်အတူနေစဉ်တွင်လိမ်လည်ခဲ့သည်ဟုသူမထင်ခဲ့သော်လည်း
ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်းလူမှုရေးအရ - ဝေးကွာသောချစ်သူများနေ့အတွက် 10 ကို virtual နေ့စွဲစိတ်ကူးများ
Aeropostale နဲ့ Hollister တို့အလုပ်လုပ်ရတာနဲ့တူတယ်
Dirty John ၏အရူးစစ်မှန်သောဘဝဇာတ်လမ်းကလွဲချော်သည်
Gene Block ၏နှစ်စဉ်လစာဖြင့်သင် ၀ ယ်ယူနိုင်သမျှ
သငျသညျ Crimson ဒီရေပရိသတ်တွေမှပြောရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်သမျှ
USA Freedom Kids မှမန်နေဂျာက 'ငါ Trump ကိုတရားစွဲပြီးသူ့ကိုရိုက်မယ်